Ulwazi olusisiseko kunye noluninzi olunxulumene neCharas
Unqulo & Umoya Chakra Ukulinganisela
Ukuqonda ngokujulile kunye nokuPhilisa iiKharas zakho
Olu qoqo lwamanqaku lusetyenziswe nakubani na onomdla ekujuleni kwisifundo esiyinkimbinkimbi se-chakras, aura, kunye nommandla wamandla omntu,. Funda iziseko ze-chakra, uhlole impilo ye-chakras yakho, zama ukuzisebenzisa kunye nezicelo, kwaye uhlolisise imithi esekelwe ngamandla enjongo yokulinganisela inkqubo ye-chakra. Le ngcaciso yecandelo le-chakra izokukunceda ufumane oko ufuna. Kwakhona, thabatha i-chakra yemibuzo yakho ukucacisa ukuba sele uyayazi kangakanani malunga nale ngongoma kunye nento ofuna ukuyifunda ngayo.
Chakra Ukulinganisa Ishadi. Print Collector / Getty Izithombe / Getty Izithombe
Funda ukuba yeyiphi i-chakras, indlela asebenza ngayo, kwaye kutheni impilo ye-chakras yakho ibalulekile ekuphumeni kwakho konke.
Ziziphi ii-Chakras? - Isiseko malunga ne-chakras kunye nokuba zibaluleke kangakanani kwimpilo yakho.
Isingeniso kwi-Seven Major Chakras - Iikrasi eziyisixhenxe ezinkulu zisebenza kunye njengenkqubo epheleleyo. Ziyizitho zangaphakathi ze-anatomy yethu esoteric.
Ukujonga ngokubanzi Inkqubo yeChara - Isatriki esinceda sibonakalisa umbala, imvakalelo, kunye neyakhethi ye-chakras nganye.
Inkqubo ye-Polaity Chakra - Ukuzivocavoca, imiyalelo yokuphulukisa, ulwazi oluncedo ngo-Rita Milios kwinkqubo ye-chakra.
I-Chakra Book List - Iziphakamiso zokufunda zobugcisa bokuphilisa malunga ne-chakras kunye nemisebenzi yamandla.
Ukuphilisa iCharas yakho
Kukho iindlela ezahlukeneyo ongayisebenzisa ukuhlalutya kunye nokulungelelanisa i-chakras yakho ngokusebenzisa ukuphulukiswa kwamandla, ukusebenzisana nezixhobo zokulinganisela kwe-chakra kunye nokuziqonda.
I-Spring ihlambulule i-Chakras yakho - Unokumangaliswa ukuva ukuba ukuziphatha kwakho kwindlu kwindawo ehlala kuyo kubonisa indlela ovulekileyo okanye onamathele ngayo ii-chakra zakho.
Ukuhlola inkqubo ye-Chakra - Eli nqaku liphendula umbuzo womfundi malunga nokuba yintoni i-chakras ebonakala ngayo kunye nenkqubo yam yokujonga kunye nokuhlaziya imeko ye-chakras yomntu.
Ukutya okwenza i-Chakras yakho- Ngaba ukondla i-chakras yakho kunye nezondlo abayidingayo?
Kukho iikrasi eziyisixhenxe eziphambili. Ngokuxhomekeke kwenkcubeko, i-chakra yesibhozo eyintloko isifundiswa. Intsimi yamandla yomntu okanye indlu ye-aura i-chakras nganye. Kukho ezininzi ii-chakras zesekondari kwimibutho yabantu kunye ne-chakras kwizilwanyana. Kukho i-chakras zomhlaba.
Umsuka weCrara - Iziko lokuqala lamandla lifumaneka kwisiseko somthunzi. Lo msebenzi wale chakra udala umuzwa wethu wokhuseleko kunye nentlalo-jikelele.
I-Sacral Chakra - Iimeko ezinamandla zeskra yethu yesibili zibaluleke kakhulu. Inquma isondo kunye nesondlo samadoda nabasetyhini.
I-Solar Plexus Chakra - Le yesikhungo samandla esilawula amandla ethu, amandla kunye nokuzithemba. I-Solar Plexus chakra ingakanani na?
Inhliziyo Chakra - I-chakra yesine iyaziwa njengentliziyo ye-chakra. Ifumaneka kwisibilini sesibindi, yindawo ekhoyo yokuziphatha kwethu.
I-Throat Chakra - Le ndawo yombane ikhona kwindawo yomqala. Isimo salo sichaza indlela esichazela ngayo iingcinga zethu ngobuchule.
Iso lesithathu okanye i-Browp Chakra - I-chakra yesine iyaziwa njengentliziyo ye-chakra. Ifumaneka kwisibilini sesibindi, yindawo ekhoyo yokuziphatha kwethu.
I-Crown Chakra - I-chakra yesixhenxe iphezu kwentloko. Kubizwa ngokuba yi-chakra yesithsaba ngenxa yokuba yinto engokomoya. Kwaziwa nangokuthi yiSharara.
Ngaphandle kweCharra Primary
Olunye ulwazi malunga ne-chakras ezincinci ezaziwayo.
I-Star Star Chakra - Funda injongo yale chakra eneziseko ezinzulu.
I-Chakras kwizandla Zakho kunye neenyawo - Ingxoxo egcinwe kwi-chakras ekhohliweyo.
I-Chakras yePlanethi - ulawulo lweplanethi ye-chakras yezobuchwephesha beenkwenkwezi.
Iingcamango ze-Chakra kunye nokuSebenza
Ukuqokelela ukucamngca kunye nokusebenzisa izinto ongayisebenzisa ukuze uhlawule i-chakras yakho kwaye unondle umzimba wakho wamandla.
Umsuka Chakra Ukucamngca - Ngaba ulungele ukudibanisa ngamandla nekrasi yakho? Ukucamngca okufutshane kukukhokelela kuza kukufumana khona.
Ukulinganisa i-Chakra Bath - Le bhayile yokucamnganisa ibandakanya imibala kunye ne-chakras.
I-Chakracises - Nazi ezinye iindlela ezilula ozenzayo ekhaya ukuze ufumane uncedo lwe-chakras yakho kwimpilo.
Ukugxininisa kwi-Sun - Le ngcamango inikeza ukufudumala namandla kummandla we-plexus chakra wakho.
I-Chakra Zen In Incantations - Izibhengezo ezisekelwe kwiimfundiso zokuphefumula evela kwincwadi ka-Eric Maisel ethi Ten Zen Seconds .
Ukuphuhliswa - Ukucamngca okukhokelwayo - Ukucamngca kwekray oyithandayo okuya kwenza intliziyo yakho ikhule.
Ukubonakalisa ukuKhanya okuMhlophe - Ukujonga ngokucacileyo ukukhanya okumhlophe kuhamba ngokukhululekile njengowomanzi ngaphantsi kwezona zihlandlo ezisixhenxe zomoya.
Amakristali kunye neeGemstones ezihambelanayo neMbala ye-Chakras yakho
Amatye amaninzi kunye neekristali zihambelana nekrasi enye okanye ngaphezulu. Umgaqo omhle wesithupha ekukhetheni ilitye eliyilitye lokusetyenziswa kukusebenzisa umbala wekhowudi. Umzekelo, amatye anesinki kunye namatye ahlaza aqhelekileyo ahambelana nentliziyo ye-chakra. Amatye anamaPuphu kunye nama-violet anjengama-amethyst, i-sugilite, kunye ne-fluorites ahambelana ne-brow okanye ye-chakra yesithathu.
I-Chakra Ukulinganisela Amakristali
I-Rose Quartz Mediation - Ukucoca Inhliziyo yakho Chakra - Ukucamngca ukuphulukisa kunanini nayiphi intliziyo yakho ibuhlungu.
I-Chakra Stones ne-Zodiac - Ngaphandle kwamatye okuzalwa!
I-Kyanite njengesixhobo sokulinganisela i-Chakra- Mhlawumbi le nto iyona yelona eluncedo kakhulu le-chakra.
Indlela yokuPhilisa yokuThoma kwiitye - Indlela enamandla kunye neyobuchule yokucoca kunye nokulinganisa i-chakras.
I-Chakra yobuGcisa kunye neengubo
Umzobo obonisa i-chakras ayikho into enhle kuphela kodwa inokutshabalalisa indlela yokuphilisa. Kwakhona kuyashukumisela ukuhlolisisa indlela abaculi abachazela ngayo i-chakras ebonakala ngathi.
Iimpawu ze-Chakra - Imifanekiso emihle ebonisa isimboli se-chakra kunye nolwazi oluninzi malunga ne-chakras ngokubanzi.
I-Chakra Art Posters - Zithengela i-chakra ze-posters ezimnandi.
I-Chakra Boosters I-Tataling Tattoos - Iimpawu ze-Chakra zikhuthaza ubomi bakho kwaye zivelise kakuhle.
Amaninzi asekelwe kumandla kunye nezinye iintlobo zokuphulukisa imithi ziquka ukucima nokulinganisa i-chakras kunye nensimu ngokubanzi. Kule ndawo zimbalwa.
Ukuphulukiswa kwamandla e-Chios - Inkqubo ephilileyo yokuphulukisa amandla esebenzisa i-aura kunye ne-chakra zobuchule bokuphulukisa,
I-Crystal Therapy - Ukusebenzisa iikristali zokuphilisa kunye ne-chakra ukulinganisa.
I-Massage Therapy - I-Chakra yokulinganisa iifom e-massage.
Ukuphulukiswa kwePranic - Amandla e-Chi asetyenziswe nge-chakras ye-palm chakrasti yokucoca, ukuvuselela nokuvuselela indawo engxaki.
I-Reiki Healing - I-Chakras ayilona nxalenye yecandelo loqeqesho luka-Reiki onokuzuza kulo ndlela yokuphulukisa.
Yoga kunye neKhakra Yakho
I-Yoga Inokusiza I-Solar Plexus yakho - I-chakra yakho yesithathu ilawula amandla amandla akho, ukuzithemba kunye nobuntu. I-chakra yakho yesithathu yindawo apho ufunda ukudala imida kuwe.
Izilwanyana ezisisibhozo zoLuntu - i-yoga echaphazelekayo kunye nokuzicamngca zinikezelwa kwisahluko ngasinye sale ncwadi nguYogi Gurmukj ezicacileyo kwi-chakra nganye.
Isingeniso Ku-Chakras & Amanqaku - Khangela malunga nolwalamano phakathi kwe-chakra yeenkqubo zama-yoga zamaHindu kunye neenkqubo zenkqubo ye-yoo ye-Taoist.
Ziziphi ii-Chakras ezinkulu?
Ukunakekelwa kwamazinyo weenja kunye neekati
Funda nge-Spin ye-Chakras yakho
Funda kabanzi malunga neTroat Chakra
Umhla we-Ash ngoLwesithathu unqunywe njani?
Yintoni enokuyilindela kwiKlasi yee-Graduate Online
'I-Elves kunye ne-Shoemaker' - I-Fairy Tale yabazalwana bakaGrimm
Thatha ixesha lokuPhatha kwaye uphendule iimpendulo zakho
Yintoni yokugqoka kwiCandelo lokuCoca
Umyalelo wokugqibela (ukubunjwa kunye nentetho)
Ingelosi Yingelosi uGabriel Quiz Muhammad in Hadith njani?
Izinto Ezi-7 Ongazi Ngayo Iincwadi Eziphambili Zika-2016
IYunivesithi yaseKansas Ifoto yeTyelelo
I-Argot Inkcazo kunye nemizekelo
Iqoqo le-Stencils ye-Stencils
Inkqubo yeTeknoloji yeSikolo yexesha elizayo
I-Oligocene Epoch (iminyaka eyi-34-23 yezigidi ezidlulileyo)
I-Tetrapods - Intlanzi ngaphandle kwamanzi
Iingcamango Zengqondo ezingabonakaliyo kubafundi abadala